Ekuqaleni kuka-May yonke imicabango nezingqondo zezigidi zabantu lwabantu ezwe elaliyi-USSR abaphendukela bebheke usuku olukhulu, Meyi 9. Lolu suku thina ngasilibala, ngoba kwaphawula ukuphela kwempi zokuchitheka kwegazi okukhulu kunakho besikhathi sethu. It kwabulala eziningi izakhamuzi zethu nabo, izigidi zemikhaya ehlukana nokuthi niyotshela saletha usizi olukhulu ukuthi ababambiqhaza ophilayo lezo zenzakalo ingahle khumbula lesi sikhathi ngaphandle izinyembezi.
Abaningi heroes ziye ukhohliwe. Cishe ngeke ukwazi okwakukhona ipi yawo wokugcina. Kukhona futhi labo abamagama uyohlala phakade ezindaweni ezisithekileyo ezinhliziyweni. Phakathi heroes akuyona amadoda kuphela, kodwa futhi amadolobha amahle ka ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe, ngubani kuleyo minyaka esibi sama ngaphansi kwengcindezi esindayo amaNazi, noma izinyanga eziningi wamelana ukuhlaselwa kwabo.
Lokhu ezinegunya abathola imizi elishumi elinamibini yase-USSR, ezazidume ngokutshala umlando wakhe ukuzivikela. On indawo yabo kukhona ezikhumbuzo olufakiwe futhi steles, okuyinto zenzelwe njalo ukukhumbuza izakhamuzi mayelana engenakuqhathaniswa ngesenzo nobuqhawe abantu babo.
Kumelwe sikhumbule ukuthi idolobha-Amaqhawe Omkhulu Patriotic neMpi, isithombe, abamagama isihloko, kukhokhelwe ezinegunya igazi lakhe okuningi njengoba wathola isibindi sakhe okwakungakaze kube khona ukuvikela abavikeli eminyakeni enzima kakhulu.
Isihloko waklonyeliswa Meyi 8, 1965
Esikhathini kwentwasahlobo, amaJalimane bakwazi ivimbele ngokuphelele supply wedolobha lonke izwe. Yaqala nokuvinjezelwa kweLeningrad, eyathatha cishe 872 ubude, usuku elambile. Cishe zonke izakhamuzi zomuzi wakubo - amaqhawe ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe. Photo «Leningrad ukuvinjelwa" futhi namanje ugqozi yokwesaba nobuhlungu ofayo ngisho Veterans lukhuni izimpi zendawo, ingasaphathwa abahlanganyeli ngqo izenzakalo.
Isibindi sezinye izingane abantu bayo kwaba ngezinga elingakaze lifinyelelwe: ezimweni ngokuphelele ngonya abagcinanga walwa bahlaseli, kodwa ngisho wakwazi ukubeka usheshise ukukhiqizwa kwezintsha isikhali esasetshenziswa ngokushesha ayephambili, ngokoqobo ukwakha simila. Kuze kube manje, kodwa kukholakala ukuthi wafa abantu ezingaba yingxenye yesigidi kusukela indlala nezifo.
3% kuphela lase libhujisiwe ngo izingalo. Yonke enye into yenziwa indlala. Namuhla, wonke wesikole uyazi ukuthi okuwukuphela kwendlela yensindiso kwaba "Road of Life", eyaqala kanye okokuqandisa ice ebusika Lake Ladoga. Nokho, futhi ehlobo lokufeza zokuthutha ezokuthutha amanzi, kodwa amavolumu zabo akuzona ezinkulu. Ngempela kwakungokungenanjongo ngendlela yokuphila, njengoba kulo mzila wakwazi ukushiya umuzi wabantu abayizigidi ezingu-1,5, phakathi okwakukhona ikakhulukazi izingane, abesifazane nabantu asebekhulile. Ekugcineni yakwazi phakamisa nokuvinjelwa edolobheni kuphela ngo-1944.
Ucabanga ukuthi laba njani lapho othi inkulumo ethi "edolobheni heroes lweMpi Enkulu Patriotic"? Izithombe izikhumbuzo enkundleni yempi, nokuningi. Nazi nje nokuvinjelwa amazwi zingase zizibuze ngisho, njengoba simi phambi kwamehlo abanye, izithombe ezesabekayo kahle leyo minyaka.
Kumemori lwalezo zinsuku ezimbi kwase kunesiqiniseko izikhumbuzo eziyisikhombisa, kanye ngokunembile 112 izinsika esiyisikhumbuzo kuwo wonke Road of Life. Emaphakathi lesikhumbuzo Ukwakheka kuyinto lesikhumbuzo "Aparted indandatho" elimelela yokugcina ukufohla ukuvinjelwa nokukhululwa Leningrad. Yiqiniso, yonke imizi olukhulu ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe kukhona yinhlonipho, kodwa umnikelo kweLeningrad zikhunjulwe phakade.
Rank futhi waklonyeliswa ngoMeyi 1965.
Odessa isibe elinye lamadolobha okuqala abekade ngendlela wabahlaseli. Ngokuyinhloko ngo-August 1941, naphezu isibindi ngezinga elingakaze libonwe abazivikelayo, sivinjelwe ngokuphelele. Kukhona indlela kuphela kolwandle, ivikela ezihlukahlukene Sea Fleet. Kusukela kolwandle ke wathola hhayi kuphela omningi ukudla, kodwa futhi isikhali avunyelwe ekulweni ekuthuthukiseni amabutho esitha anamandla.
Ukuvikela ngempumelelo ukuhlasela okwandayo yama-Jalimane, kwase kunesiqiniseko endaweni enezivikelo eziqinile. Izakhamuzi ephethwe ukukhiqiza e kwezimo ezinzima kakhulu zempi ezilula futhi ilangabi-throwers, ngubani masinyane bawa anawo amasosha. Abavikeli Odessa kwadingeka ukuba bawushiye lowo muzi, kodwa babengasekho, kuyelelwe bonyana akukafaneli kuphulwe waweyisa: abaningi babo kamuva kwamiswa squads e ukuqina efanayo kanye isibindi esifanayo bazivikele amaNazi eCrimea.
Okwamanje, lesikhumbuzo, which busisa izenzakalo lwalezo zinsuku, setha epaki yaqanjwa Taras Shevchenko. Kunalokho, kuba eziyinkimbinkimbi ayisikhumbuzo "Hamba Lodumo", okuyinto phakade athumba ukuze kuzuze izizukulwane ezaziyolandela impumelelo wawoyise okukhulu. Ngokuvamile, yonke imizi olukhulu ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe babe nezikhumbuzo efanayo.
Isihloko waklonyeliswa inkathi efanayo njengoba amadolobha oshiwo ngenhla.
ECrimea kuye kwadingeka njalo a ukubaluleka lwamasu leli zwe, njengoba kungenca insimu yalo wagijima ngendlela emfushane eya emasimini uwoyela of eCaucasus. Akumangalisi ukuthi kusukela ezinsukwini zokuqala empini izinduna Wehrmacht wanika amabutho abo ukuze elula: ngaleso kungakhathaliseki ukuthi ulahlekelwa yini e esikhathini esifishane ukuba abambe futhi Sevastopol ahlanzekile. I-USSR umyalo ukukhohlisa kule score futhi wayengekho: eCrimea, kwakukhona ingxenye enkulu izindiza, okuyinto ayikwazi yibhece isitha. Kudingeka ukuvikela muzi isikhathi eside isikhathi ngangokunokwenzeka.
On ukuzivikela ngokushesha bona baphonswa amabutho engcono, okuyinto ngesikhathi esisodwa ababephikisana isitha e-Odessa. Bakha isiqalo of ukunyakaza yabashokobezi, elimalungu alo ababeshumayela insimu yonke enhlonhlweni yaseCrimea. Ngeshwa, ngo-July ngonyaka ozayo, idolobha namanje kwadingeka bahambe.
Nokho, amaJalimane kwakungafanele bazizwa beqiniseka kakhulu emzini athunjwa, njengoba amabutho azo njalo patted abashokobezi. Ngokugcwele ephethwe ukuze akhulule Sevastopol ngo-May 1944. Indondo "Ngoba Ulwela Sevastopol 'bezilokhu kubhekwe ku ezinhlwini iRed Army elite, njengoba enkulu zenziwa yilawa labo bavikela lesikhumbuzo ubudala wenkazimulo lempi Russia nase-USSR.
Ukuze sigxilise unaphakade ezisenkumbulweni yesizukulwane sakhe, kulezi zinsuku, isikhumbuzo lamiswao eNtabeni Sapun. Le ndawo kuyisihluthulelo edolobheni, isikhundla ezibaluleke kakhulu ukuzivikela, zabulala isibalo esikhulu sezithunjwa amasosha aseSoviet nesiJalimane. Nokho, kungaba okufanayo libhekene zonke ezinye yedolobha Amaqhawe Omkhulu Patriotic neMpi iminyaka 1941-1945.
Rank futhi waklonyeliswa Meyi 8, 1965. Lapho kwakukhona impi ezimbi kwaseStalingrad, phakathi kwesikhathi lapho ibutho laseSoviet olwakwazi ukuphula umgogodla amabutho kaHitler, lo muzi wawuyinhloko inkundla. Njengoba abaningi njengoba 200 izinsuku lwalusaqhubeka, igazi kuliwa ngoba zonke imitha isikhala ezisemadolobheni, yileyo naleyo ndlu aphenduka inqaba.
Phakathi nenyanga, ukuthi amaJalimane kwakudingeka ayehlasela Poland ngesikhathi, amaJalimane bakwazi ukuzitholela ambalwa izitaladi kwaseStalingrad, incurring ukulahlekelwa okukhulu. Amandla owayelwa esabekayo, zombili ngempumelelo futhi asetshenziswa kabanzi lokudutshulwa.
On the adumile Mamayev Kurgan kuyinto eziyinkimbinkimbi omkhulukazi "Ukuze Heroes of the Battle of kwaseStalingrad" phezulu esimelela isikhumbuzo giant kuya Motherland, okuzokwenza njalo abe uphawu uthando nokuzinikela abantu bethu ezweni lenkaba yawo. Kulesi sihloko, kukhona idolobha amaqhawe ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe hhayi kuphela: izithombe nesithombe amasayithi ukuze uzizwe zonke izindawo omkhulukazi.
I-oda ukunikeza isihloko sasayinwa Meyi 8, 1965. Kufanele kuqashelwe ukuthi njengamanje iziphathimandla ezintsha Ukraine ukuba "ukuhlehlisa" ke. Nokho, abazi ukuvikela Kiev, kungukuthi ikhishwe. Ngakho ukuthi "imiyalo ukuqedwa isimo edolobheni-iqhawe" hhayi ukuwashicilela.
ukusebenza ukuzivikela eyathatha ncamashi 70 izinsuku. Umsebenzi kulo muzi ngokucela abantu amabutho aseJalimane esalibele iminyaka 2.5. Phakathi nalesi sikhathi, namaJalimane yabo iziphanyeko-ubuzwe babenegunya elikhulu "umsebenzi": kunonophiswe kubuye amaJuda badutshulwe, ekamu lokuhlushwa iziboshwa Soviet okudalwa impi, abulala izinkulungwane amasosha lethu lahlelwa.
Labhujiswa izikhumbuzo emlandweni futhi yokwakha eziningi, yanyamalala unomphela izinto eziningi zobuciko eziyigugu ezivela iminyuziyamu. Yiqiniso, abaningi abahlali Kiev abaye bahlanganyela kule nhlangano yabashokobezi, yonke imizamo ukuze bavikele idolobha bomdabu ekuhlushweni amaNazi. Kodwa kuphela ngemva esindayo izimpi ebusika ngo-1943 lapho akhululwa amabutho amabutho aseJalimane. Phawula ukuthi bobabili edolobheni-Amaqhawe Ukraine (yiMpi Enkulu Yobuzwe ka 1941-1945) babhujiswa cishe ngokuphelele, futhi ababuyisele kwadingeka isikhathi eside kakhulu.
Njengoba e Volgograd, kukhona lesikhumbuzo ukuze "Motherland".
Fortress e Brest
Itshe lesikhumbuzo edume isibindi obuqhawe amasosha aseSoviet. Rank futhi waklonyeliswa ngoMeyi 1965. Sishilo kakade amadolobha-abantu abaningi amaqhawe ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe: uhlu kubo ingatholakala ngokumane ukuskenwa kwezihloko sihloko. Kodwa Brest - endaweni ekhetheke kakhulu, lapho ungakwazi ukukhuluma isikhathi eside.
On ukuzivikela inqaba abaningi bazi kusukela encwadini ohlolayo nelesabekayo Borisa Vasileva. Kodwa encwadini, asiqondi ukuthi wazizwa futhi lokho elinde abantu ababazi kahle ukungabi nakwenzeka kwento insindiso njalo ngehora walahlekelwa abangane babo kanye nabathandekayo. Kukho konke lokhu, abazi ngisho cabanga umaluju nesitha. Battle of Brest - ngowokuqala emlandweni mpi, futhi enye izinto eziphawuleka kakhulu.
Lokhu akusona isimanga. Amabutho aseJalimane bebehlela ukuthuthela ngiwuthathe umuzi, bese "ukunqoba imashi" ukuqhubeka ukuhamba uye eMpumalanga. Bona kwaphazamiseka miscalculated. Ezinsukwini ezimbalwa iqembu amasosha aseSoviet ngolaka bavikela ngisho izindlela enqabeni, enika amaJalimane iya ku ilinganiselwe. skirmishes Fierce ningaweli buthule ngisho ebusuku.
Amasosha, ukhathele kakhulu, omile futhi elambile, kwaze kwaba ikhulu lesibili zokugcina simelane isitha. "Ngiyafa, kodwa ungadikibali" - elilotshwe edumile omunye ezindongeni inqaba kubonisa ngokugcwele umoya wangempela amasosha ethu e abesabekayo, impi yokugcina. AmaJalimane ekugcineni athumba inqaba, lapho kungekho esiphilayo abazivikelayo, kuphela abawinile, abazange bazizwe: kuyilapho amazwe aseYurophu ukulalela ibutho lamaJalimane e kwamasonto ambalwa, ezinye inqaba esidabukisayo kuphela isibindi ezithandekayo ubuqhawe of abazivikelayo , ngakwazi ayeyiphathele kwezinyanga ezimbalwa.
Yonke castle is njengenkondlo ebonisa yesikhumbuzo okuphakade 1971. insimu yalo njalo ovuthayo ilangabi okuphakade, njalo Ukukhokha bazohlonipha amasosha bawa of Army Soviet.
Njengakuwo wonke amacala odlule, isihloko waklonyeliswa ngoMeyi 1965. Cishe bonk 'abantu ntshashintshe edolobheni eyaziwa Amaqhawe ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe. Photo «eMoscow Parade 1941" futhi ijwayelekile eziningi. Kuyinto amabutho fresh waya counter, lapha kwaba umyalo yindlunkulu iRed Army.
Akumangalisi ukuthi kusukela ekuqaleni kwempi ukuthatha inhlokodolobha yase-USSR kwakuyizwi akubona umyalo isiJalimane, futhi ngenxa yalokho asetshenziselwe le nhloso amabutho engcono. Hlela "Barbarosa" abathintekayo kokunqotshwa komuzi ezinyangeni ezintathu zokuqala empini. Nawa nje Kiev, Leningrad futhi Smolensk wagqoka zinhlelo wokuvelela engu- ngokugqamile, uhlehlise kuqale eyohlinzwa ukuze bawuthathe umuzi othile izinyanga eziyisithupha ngaphandle. On emaphethelweni eMoscow, amaJalimane zaziya phakathi ekwindla, lapho liqala emakhazeni lokuqala sina.
izinduna yethu ukuphoqelela kubo impi ukuzithumela kwezinye izindawo nokufa. Kuze-December walowo nyaka waqhubeka ezivikela eMoscow, wakhe ubuhanjelwe amaqembu eziningi ngokuqashwa kwamavolontiya.
Izikhathi eziningana isimo siba ezibucayi. Kwakubonakala ukuthi amaJalimane ayesezohlubuka bafinyelele imigomo yabo, futhi Hitler yayilungiselela aphonse idili ngokunethezeka esikhathini Kremlin. Kodwa wesihlanu Disemba, amasosha ethu umkhankaso counteroffensive isikolo sokuqala, futhi umphumela waba ukuthi amaJalimane esembula kusukela imikhawulo idolobha amakhilomitha 200 nje.
Imemori lezo zenzakalo phambi kwezindonga eMoscow ezibiyele yisikhumbuzo ku-Soldier elingaziwa. Mangisho ukuthi lesikhumbuzo enjalo ungafaka ngokuphepha umuzi wonke-Amaqhawe ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe, isithombe esinakho athikili yethu.
Isihloko waklonyeliswa 14 Septhemba 1973 kuphela. Lihlanzekile leli dolobha futhi edumile ngokuba kwesokudla front line lidlule kuye abantu abaningi kangangokuthi abane (!) Times. Wabulala okungenani abantu abangu-15,000, isigamu ababengabafelokazi ngesihluku wadutshulwa Bagerovsky emseleni. ayizinkulungwane 15 amaJalimane umsebenzi ophoqelelwe eJalimane. Kusukela muzi ezingaphansi kwezingu-15%. Cishe zonke izakhiwo ngaphezulu noma ngaphansi ezibalulekile kwabhujiswa, futhi izakhiwo lonke angahlali. Kuphela ekuqaleni kuka-April 1944 Kerch ekugcineni akhululwa abahlaseli amaNazi.
Kulona kanye igquma nge Mithridates igama elihle nje ngemva kwezenzakalo ilangabi okuphakade burns.
Rank futhi ukhishwa Phakathi no-September 1973. cishe wonke umuzi lathunjwa amabutho aseJalimane phakathi nempi. Inhloso amaNazi kwaba Georgia, indlela eqondile, ephumela ngokushesha emva ukuthunjwa Novorossiysk.
Bonke abantu baqonda ukuthi lowo mphumela, kwakuyokwenza ukuba uHitler ukuba azuze isizinda niqinile eCaucasus. enamandla Ikakhulukazi Novorossiysk endaweni enezivikelo eziqinile lamiswa ekuvimbeleni lokhu, kodwa ngo-August 1942 kuwo kancane ngakwesokunxele (akukho kuka 20%). Ngo-February 1943, ngemva kwezinsuku ezingu-225 bomsebenzi, fighters Soviet wakwazi thatha futhi bamba futhi edolobheni.
Akumangalisi ukuthi lesikhumbuzo main waba yisikhumbuzo ngokuthi "imigqa zokuzivikela". Stela 40 amamitha kufanekisela kutsi kuyoba khona villain omunye emnyango amasango omuzi. Hero of ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe, sniper Rubaho filipp Yakovlevich wayebuye ungowokuzalwa Novorossiysk ekhazimulayo.
Ukhishwa isihloko Juni 26, 1974.
ezintathu nje izinsuku emva ekuqaleni kwempi umuzi wawuyigolide ngaphansi kweJalimane. On endaweni yayo, "abazikhandlayo" amaJalimane wadala ghettos ezintathu nje lapho wabulala amaJuda mayelana 80,000. Eduze Minsk namaJalimane wabulala okungenani abantu abangaba 400,000. ngo-June 1944, ukusebenza wenkululeko kuphela emikhulu wethulwa ekugcineni. Ngesikhathi lapho umuzi wakhunyulwa ngokuphelele, kwesokunxele beqinile izakhiwo 80 kuphela.
Itshe lesikhumbuzo eziphawuleka kakhulu siyisikhumbuzo "Yama", okuyinto sanikezelwa izisulu Kwesizwe. By endleleni ekhuluma, kwaba lesikhumbuzo wokuqala lonke elase-USSR, ebusweni esesikhundleni umbhalo oqoshwe e Yiddish.
Isihloko anikezwe 7 Disemba 1976 kuphela.
NamaSoviet "Umuntu osebenza ngensimbi" kwaba target ulingeke umyalo isiJalimane, futhi ngenxa yalokho ukuvimbela bamba komuzi kwaba noma kunjalo engenakwenzeka. Ngaphezu kwalokho, Tula embozwe imingcele oseningizimu eMoscow, okwenza kube okubaluleke nakakhulu. Ekwindla ka-1941 enamandla kakhulu ukuhlaselwa German abezempi wendawo ngodumo kubonakala, indlela amaJalimane bezimi ivaliwe.
Ngesikhathi ukugqashuka kweMpi Enkulu-iMpi Patriotic, emzini Gorky (Nizhny Novgorod) kwaba cishe endaweni efanayo. Namuhla, izishoshovu Uzama kuzuzwe umklomelo kwalesi sihloko zokuhlonipha kuye. Nokho, emuva Thule.
I dolobha namanye aseduze ziye ahlasela ngesihluku. Babashisa cishe wonke amadolobhana, kwashona okungenani eziyinkulungwane 360 emphakathini. Ngisho ezimweni zokuvimbezela zibuthuntu Tula umkhakha baqhubeka ukukhiqiza izibhamu, izibhamu submachine kanye sniper izibhamu. By endleleni, at emigqeni wendawo ukuzivikela ngokuphelele afakazelwe PPK isibhamu isibhamu Korovin, umlobi onesifo iminyaka eminingi yamandla Soviet kwase usiphathe ukhohlwe.
Nokho, ukhumbula izakhamuzi endala yedolobha. Hero of ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe awuzange nya.
Ukuze kuhlonishwe lezi zenzakalo kulo lonke idolobha efakwe nezakhiwo eziningana wenkazimulo wezempi, futhi Victory Square yamisa lesikhumbuzo ngesimo amasosha abasebenzi bathembele insabule isibhamu. Zonke yedolobha Amaqhawe ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe, impumelelo yakhe belungile, kodwa Tula ngisho Yilokhu okwenza kugqame ngenxa yokuzimisela kwabo ziqotho ukunqoba.
Kuphela Meyi 6, 1985 edolobheni waklonyeliswa isikhundla ophakeme nokuthi ibaluleke ngani.
somyalelo kaHitler nebutho lakhe kwaba elula esifushane: Murmansk ngaphambilini ukubhubhisa ngokushesha nge ekuqaleni kwempi, ngoba ngokusebenzisa izimbobo zawo zazilotshiwe amathani amaningi ezinto kusukela oMfelandawonye. Ikhishwa engaphezu kwengu-800 okukhulu air kuphangwa emzini kwehla mayelana 186 izinkulungwane amabhomu ezinamandla, kodwa abavikeli yakhe ngodumo ngema kule esihogweni. emadolobheni amaningi ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe badabula ngamabhomu, kodwa kwakungekho ndawo namandla.
Cishe wonke izakhiwo zazishiswa noma zonakala. indima Kubi eyadlalwa izakhiwo sokhuni, lapho umlilo ukusakaza ngesivinini esimangalisayo. Kuphela ekwindla 1944, usongo edolobheni sekuqediwe ngokuphelele. Itshe lesikhumbuzo wamiswa. Kodwa kuye kwaba iminyaka engu-30 kuphela ngemuva kokuphela kweMpi Yezwe II, lapho umuzi omkhulu amaqhawe ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe Sekuyisikhathi eside kusukela kwaba ngo "uhlu udumo".
Isihloko waklonyeliswa njengoba Meyi 6, 1985, okuyinto engajwayelekile, ngoba abavikeli komuzi phakathi nempi babonisa isibindi uhlasela kakhulu ukwedlula abantu efanayo Kiev.
Ngo-July 1941, amaJalimane kwabonakala sengathi indlela inhliziyo yezwe uvulekele ngokuphelele. Umgomo main kwaba eMoscow, futhi zonke amanga emkhondweni amabutho aseJalimane lomuzi kubhekwa nje "inkathazo." Kakade ngoJuni 15, engxenyeni eseningizimu yaleli dolobha wayematasa, futhi ngokushesha lonke ezindaweni zakhe bakhubeka phansi igalelo okukhulu. Kodwa lokhu kwakuyisiqalo nje ekuqaleni, njengoba abavikeli sabo enkabeni yedolobha bakhangisa akacabanganga bangayeki.
Kusukela maphakathi no-July aseqalile ngezihluthu ezazihamba izinyanga ezingaphezu kuka ezimbili. amabutho aseSoviet balahlekelwa laba nzima, kodwa amaJalimane yayingenamhlabathi kangcono. Ngaphezu kwalokho, bakamalalahlengezela Kushone amasosha ezitha nezakhamuzi: eyodwa ingajezisa kuphela wabhubhisa emizaneni ezingaphezu kuka-300 nge zonke izakhamuzi zakhona.
Kusolwa ukuthi wabulala abantu abangaba yizinkulungwane ezingu-600, kodwa lesi sibalo ngokusobala okuningi eliphansi kakhulu, njengoba abaningi ngokwengeziwe amathuna mass ezinjinini uqhubeke ukuthola njalo ngonyaka. Umuzi ine a Museum, equkethe yonke imibhalo kanye nobufakazi, etshela ngokuphila edolobheni kuleyo minyaka esabekayo.
Lapha siye ohlwini yonke imizi olukhulu ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe.
UPeter Mstislavets: indlela yokuphila yomqambi omkhulu
Abashayeli bezindiza be-USSR
Catherine II: biography of the Empress. Umlando weRussia
Indlela ukupheka a ewusizo oncibilikile
Kufakiwe ukuphepha ngemisebe amazinga. OKUVUMELEKILE izinga ngemisebe
Udweba kanjani hamster ipensela